စစ်၍မကုန်နိူင်သော ခရစ်တော်၏ကြွယ်၀ခြင်းအကြောင်းဟောကြားခြင်း | Real Conversion
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၃ ) ရက်၊ စနေနေ့ ညနေပိုင်းတွင် လောဒ့်အိမ်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်း တောဟောကြားခဲ့သော Dr. R. L. Hymers, Jr. ၏တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
“စစ်၍မကုန်နိူင်သော ခရစ်တော်၏ကြွယ်၀ခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားကို တပါး အမျိုး သားတို့အား ဟောပြောစေခြင်းငှါ၎င်း၊……..သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့တွင် အငယ်ဆုံး သောသူထက်သာ၍ငယ်သော ငါအား ထိုကျေးဇူးတော်ကို ပေးတော်မူပြီ။” ( ဧဖက် ၃- ၈ )
အသက်ကြီးလာလေလေ တမန်တော်ပေါလုကို ပိုချစ်လေလေပါပဲ။ သူသည် နှိမ့်ချသောသူဖြစ်သည်သာ မက ခရစ်တော်၏စည်းစိမ်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖွင့်ပေးထားပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းချက်တွင် “ သူသည်သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့တွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုခဲ့သည်။ ပေါလုက သူ၏တမန်တော်ဖြစ် ခြင်းကို နှိမ့်ချစွာပဲရှုမြင်ခဲ့သည်။ ၁ကော ၁၅း ၉ တွင်လည်း သူသည် တမန်တော်အပေါင်းတို့တွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမတိုင်မှီတွင် “ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကို ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သောသူဖြစ်ပေသည်။” ၁တိ ၁း၁၂-၁၃ တွင်လည်းထပ်မံ၍ဖော် ပြထားပေသည်။
သို့ရာတွင် သူသည် “စစ်၍မကုန်နိူင်သောခရစ်တော်၏ကြွယ်၀ခြင်း” အကြောင်းကိုဟောပြောရန်အတွက် ကျေးဇူးတော်ခံစားရသောသူဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားသိစေခဲ့သည်။ Kenneth Wuest က “စစ်၍မကုန်နိူင် သော” ဟူသောစကားလုံးသည် ဂရိတ်စကားမှ အနက်ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပြီ “သတ်မှတ်၍မရနိူင်သော” ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်၏ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းသည် “လူသားများလုံးဝနားမလည်နိူင်သည့်အ ရာကဲ့သို့သော နက်နဲသည်ဟုဆိုရပေမည်။ (Kenneth S. Wuest, Ph.D., Wuest’s Word Studies, Eerdmans, ၁၉၉၇၊ အတွဲ ၁၊ စာမျက်နှာ ၈၄ )
ကျွန်ုပ်သည် ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကို သာမန်သဘောဖြင့်ဟောကြားခြင်းမပြုရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်၏လူများသည် သဘောရိုးခရစ်ရန်များမဖြစ်စေခြင်းငှါ သင်းအုပ်နှင့် သွန်သင်သူများ၏ကောင်းမွန်သောအ ဓိပ္ပါယ်များ၏ နှစ်ပေါင်းများစွာ သွန်သင်ခြင်းကိုခံရသည်။ ၎င်းမှာ Spurgeon ၏ တရားဒေသနာ တစ်စုံကို ရရှသည်အထိ နှစ်အတော်ကြာ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ထားသည်။ Spurgeon ၏တရားဒေသနာကို အတန်ကြာဖတ်ရှု လေ့လာသောအခါ ခရစ်တော်အကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သူ၏နက်နဲသောဟောပြောမှုကိုစတင်အံ့ဩမိလာသည်။ ထို့ကြောင့် မတူညီသောနည်းလမ်းများအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မတူညီသောကောင်းကင်တမန်များမှလည်း ကောင်း၊ Spurgeon ကဲ့သို့လည်းကောင်း တရားဟောပြောရန်တွေးတောခဲ့သည်။”ဤမျှရှည်ကြာသောအချိန်ကာ လထိတိုင်လုပ်ဆောင်နိူင်ခြင်းမရှိဘဲဟောပြောမည့်အကြောင်းအရာများကုန်သွားသည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ သောကဝေလိမ့်မည်” ဟုကျွန်ုပ်ထင်မိခဲ့ကြောင်းကို သတိရမိသည်။
ကျွန်ုပ်မှားယွင်းစွာတွေးတောမိခဲ့သည်။ ယခုတွင် တနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းအစီအစဉ်များတွင် ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောနေသည်မှာ အတန်ကြာရှိလေပြီ။ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်သည် အပေါ်ယံမျှသာတူဖော်သည်နဲ့ တူပေသည်။ ယခုတွင် ဟောပြောမည့်အကြောင်းအရာပြင်ဆင်မှုများ ကုန်ဆုံးမည်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်တော့ပေ။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်သည် စစ်၍မကုန်နိူင်သော၊ နက်နဲလှသော၊ “သင်မည်သည့်အချိန်တွင်မျှအနှစ်ဆီသို့မ ရောက်နိူင်သော” ခရစ်တော်၏ကြွယ်ဝချမ်းသာကို ကျွန်ုပ်ဟောပြောနေသည်။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်လျှင်ပင် ကျွန်ုပ်မပြီးမစီးနိူင်မည့် ခရစ်တော်၏ကြွယ်၀ခြင်းအကြောင်းများစွာပြောရန်ရှိပေသည်။
ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားစဉ်ဆက်မပြတ်ကြားနာခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူတို့အား ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သကဲ့ သို့ သဘောရိုးမဖြစ်စေဘူးလား။ ထိုသို့လုံးဝမဖြစ်စေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကောင်းဆုံးခရစ်ယာန်များရှိကြောင်းကို ကမ္မာပေါ်ရှိနေရာတိုင်းတွင် သင်တွေ့မြင်နိူင်ပါသည်။ ၎င်းမှာ ဝါကြွားစရာမဟုတ်ပါ။ အမှန်တရားသာဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း အရမ်းခိုင်မာသောခရစ်ယာန်များကမ္မာပေါ်တွင် ရှိလျက်နေသေးသည်။ သူတို့သည် ဧဝံဂေလိဟောကြားခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲလာကြသည်။ ဧဝံဂေလိဟောကြားခြင်းဖြင်း အသက်ရှင်ကြသည်။ ဧဝံဂေလိအားဖြင့် ခိုင်မာတောင့်တင်းလာကြသည်။ ယခုတွင် အောက်ပါကျမ်းချက်ကို မိန့်ဆိုသောအချိန်၌ ပေါလု၏ဆိုလိုရင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ခါစပြုလာပေသည်။
“ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံတော်မူသောသခင်မှတပါး၊ အဘယ်အရာကိုမျှသင်တို့တွင် ငါမသိမမှတ်ဟု ငါ့စိတ်ပြဌာန်းခြင်းရှိ၏။” (၁ကော ၂း၂ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောအဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သဖြင့် ထိုခရစ်တော်၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်၌ ကြီးထွားလျက်ရှိကြသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို သန့်ရှင်းစေပါသည်။ ခရစ်တော်သည် “အာလဖ နှင့် ဩမေဃ ၊ အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူသည်။” (ဗျာ ၁း၈ )ခရစ်တော်သည် “ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို စီရင်သောသူ” လည်းဖြစ်တော်မူသည်။ ( ဟေဗြဲ ၁၂း၂ ) မနေ့ညက ကျွန်ုပ်ဟောထားသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည် ညဏ်ပညာ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ရွေးနှုတ်ခြင်း တို့ကို စီရင်ပေးထားသည်။ (၁ကော ၁း၃၀ ) ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းတို့ သည် ခရစ်တော်၌ချထားသည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမို၍ဟောကြားရန်လိုအပ်သောအရာမရှိပါ။ Mr. Griffith သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသော ဂျာမန်သီချင်းဟောင်းတစ်ပုဒ်ကို သီဆိုခဲ့သည်။
နံနက်သည် ကောင်းကင်ယံကို ရွှေရောင်လွှမ်းချိန် ကျွန်ုပ်နှလုံးနိူးထအော်ဟစ၊်
မကောင်းကြံစည်ပေါ်ထွက်စဉ်ခါ ကျွန်ုပ်ရင်မှာ ကွယ်ကာပေး၊
ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲသောက ပြည်နေလား၊ နှိမ့်သိမ့်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်ရှာတွေ့၊
သို့တည်းမဟုတ် ကျွန်ုပ်ပီတိ လွင့်ပျံ့နေလား၊ ကျွန်ုပ်အတွက်နှိမ့်သိမ့်ခြင်းရှိလျက်သား၊
ဘဝအသက်တာရှိလျက်စဉ်ခါ ဤသည်များဖြစ်စေသား၊ ကျွန်ုပ် (ချီးမွမ်းရာ )ဘုရား၊
အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး ထာဝရကျူးဧသီချင်း သီဆိုမည်၊
(အမည်မသိသူရေးသား၍ ဂျာမန်ဘာသာမှ Edward Caswall, ၁၈၁၄-၁၈၇၈ ဘာသာပြန်
ထားသည့် “ယေရှုခရစ်ချီးမွမ်းခံထိုက်ပေသည်” သီချင်းမှ ဖြစ်သည်။ )
သို့မဟုတ် Mr. Griffith က မနေ့ညတွင် သီဆိုကျူးဧသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ယေရှုကျွန်ုပ်အတွက်ဖန်ဆင်းပေးထားသည်၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သမျှ၊ လိုသမျှ
ညဏ်ပညာ၊ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊နှင့် တန်ခိုး ၊ သန်းရှင်းခြင်းများ ဤအချိန်နာရီတွင်
( အမည်မသိသူရေးစပ်၍ ၁၉၆၃ တွင် Dr. John R. Rice က “ Revival Specials အမှတ် ၂”
တွင် မူပိုင်လုပ်ဆောင်ထားသော “ကျွန်ုပ်အလိုအပ်ဆုံးယေရှု” သီချင်းမှဖြစ်သည်။ )
ကျွန်ုပ်သည် ကောင်းကင်တမန်များထံမှ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားရန်ကြိုးစားသည့် ဤအစီအစဉ်ကို ချမှတ်ထားသည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏တရားဒေသနာသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဆွဲဆောင်မှုမရှိမည်ကိုစိုးရိမ်မိသည်။ သို့ရာတွင် ယခုတွင် ထိုဒေသနာကို ဖတ်ရှုသူများစွာက ခွန်အားပေးလျက်ရှိကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်လတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝပ်ဆိုက်တွင် “ဖော်ပြချက်” ပေါင်း ၁၀၀၉၈၉ ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ခွန်အားဖြစ်စေသော စာပေါင်းများစွာရှိပေသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိူင်ငံတွင် သာသနာပြုနေသော သာသနာပြုသူတစ်ဦးက လွန်ခဲ့သည့်လ ကျွန်ုပ်၏ ခုနှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကျွန်ုပ်ထံစာပေးပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းကို သင်တို့အား ဖတ်စေလိုသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ဝင့်ကြွားဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် သူရေးသားသည့်စာသည် အရမ်းလှပသည်ဖြစ်၍ ဝေငှလိုသည်။ သူသည် အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားကိုသာပြောဆိုသည်ဖြစ်၍ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားသည် သူ၏ပထမဘာသာစကားမဟုတ်ပေ။ ဤစာကိုရေးသားရန်အတွက် အချိန်များစွာပေးရ မည်ကို ကျွန်ုပ်သိနားလည်သည်။
သင်၏တရားဒေသနာတွင်သံဇဉ်တီးဝိုင်းအတွက်စပ်ဆိုသောတေးသွား တစ်ခု ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ Beethoven၏ငါးကြိမ်မြောက်သံစဉ်ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ တူညီသည့် ပြန်ပြောင်းသတိရစေသောအကြောင်းအရာတစ်ခုပါဝင်ပေသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသည်။ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်နှင့် ရန်ငြိမ်းစေခြင်း၊ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆိုင်သော တရားဟောချက် ၏အရေးကြီးမှုသည် သင်၏တရားဒေသနာများတွင် အကြိမ်ကြိမ် ပါဝင်ပေသည်။ သင်သည် “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ” နှင့် ယနေအသင်းတော်များရှိမှားယွင်းမှုများကို ဆန့်ကျင်ဟောပြောသည်။ ဤအကြောင်းအရာများသည် Beethoven ၏ ငါးကြိမ်မြောက် သံဇဉ်တေးသွားကဲ့သို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ဖော်ပြထားပေသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါလည်းပါဝင်ပေသည်။
သင်၏တရားဒေသနာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နားတွင် ပဲ့တင်ပြန်စေပြီး ဘဝအ သက်တာနှင့်အခွင့်အရေးသည် မကြာခင်ပျောက်ကွယ်သွားမည်အကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါ သတိပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခွင့်ထူးများပိုင် ဆိုင်စဉ်အချိန်မှာ ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို ဆက်လက်ဟောကြားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအသက်တာများသည် ပင်စည်မှလွတ်လပ်မှုကိုရှာ၍ကြွေလွင့် သော သစ်ရွက်ကဲ့သို့ ကြွေသွားပျောက်ကွယ်နိူင်ပေသည်။ ပထမတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် လွတ်လပ်မှုတွင်ပျော်မွေ့ကြပြီး လွတ်လပ်မှုအချိန်ကာလသည် မကြာခင် မှာပဲ ပျောက်ကွယ်သွားပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာသည် နောက်ထပ်ထုတ် လုပ်မှုမရှိကြောင်းသတိပြုမိလာသောအခါ ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်ထူးများ ဆုံးရှုံးလာပေမည်။
သင်၏တရားဒေသနာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နားထဲတွင် ပဲ့တင်ပြန်စေပြီး ကြား နားရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၊ ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းတွင် လုပ်ဆောင်သောသူများဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထပ်တလဲလဲ သတိပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအသက်တာများနှင့်အခွင့်အရေးများသည် စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းများ တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုပြူးစေသည့် အရောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော လှပသည့် သက်သန့်တစ်ခုနှင့်တူပေသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်း၏အလှအပနှင့်တည် ရှိခြင်းများကို လေမုန်းတိုင်းမှုတ်ထုတ်လွင့်သွားစေသည်။ ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိ တရားဟောရန် အံ့ဘွယ်အခွင့်ထူးများ ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသည်။သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏အလှအပကို အံ့ဩရုံသာရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အခွင့်အရေးများပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဘာမှ, မကျန်ခဲ့တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန် များသည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်ကပေး ထားသည်။ အနှောက်အယှက်များရှိနေသော်လည်း အများမှာဖွင့်လျက်ရှိပေ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဟောချက်ကိုငြင်းဆန်သောသူအများထဲမှ ခရစ်တော် ကို ယုံကြည်လက်ခံသောသူအချို့အမြဲတမ်းရှိပေမည်။
သင်၏တရားဒေသနာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နားထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်စေပြီး အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားမှာ နည်းလျက်ရှိကြောင်းကို သတိရစေ ရန်ထပ်ခါတလဲ သတိပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်ထူးများနှင့် ဘဝအသက် တာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စိန်ခေါ်ရန် လေလှိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားသည် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ကန်းခြေရောက်သောအခါ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလျော့သွားသောလှိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပေသည်။ တခါတရံ ကျွန်ုပ် တို့သည် စိတ်အားထက်သန်ကြသော်လည်း အလုပ်ကို မကြာခဏစွန့်ပစ်လိုကြ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် ဝိညာဉ်မီးလောင်သောအခါ ကျွန်ုတို့၏တရား ဟောခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ဆက်လက်၍လောင်ကျွမ်းရန်လိုပေသည်။ သင်၏တရားဒေသနာသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြုပြင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏နားထဲတွင် တမန်တော်ပြောဆိုသကဲ့သို့ ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။ “ အားထုတ်ခြင်းအရာမှာ ပျင်းရိခြင်းမရှိဘဲလျက်၊ စိတ်တန်းသဖြင့် သခင်ဘုရား၏အလိုတော်သို့ုလိုက်၍ အားထုတ်ကြလော့။” (ရောမ ၁၂း ၁၁ )
သင်၏တရားဒေသနာက ဘုရာသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်က ဤသို့ဆို ထားကြောင်း သတိပေးထားသည်။ “ လူတို့၏နေ့ရက်ကာလသည် မြက်ပင်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ လူသည် လယ်ပြင်၌ရှိသော ပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်တတ်၏။ လေသည် လွန်သွားလျှင် အပွင့်ပျောက်၍၊ သူ၏နေရာသည် နောက်တဖန်သူ့ကို မသိရာ။ ( ဆာလံ ၁၀၃း ၁၅-၁၆ )
သင်၏တရားဒေသနာအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိတရားဆက် လက်ဟောကြားရန်သွန်သင်လျက် သင်ထိုးသွင်းသော သနားခြင်းမေတ္တာအ တွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်အတွက် သင် လုပ်ဆောင်သောအရာများအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ၊ သင်းအုပ်ဆရာရယ်။ သင်၊ သင့်မိသားစု၊နှင့်အသင်း တော်မိသားစုအားလုံးကန်းမာချမ်းသာစေကြောင်းပါ ……..။
အမှုတော်မြတ်၌ သင်၏သား ,
အက်ဒီ (Edi )
နှလုံးသားထဲမှလာသော ထိုပေးစာကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ သစ္စာရှိသော သာသနာပြုက ကျွန်ုပ်ထံပေးပို့ သောစာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်နှလုံးသားကို တို့ထိသည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ဝေငှရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ဧဝံဂေလိတရားစကားဆက်လက်ဝေငှရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် “စစ်၍မကုန်နိူင် သောခရစ်တော်၏ကြွယ်၀ခြင်းအကြောင်း” ကြွေးကြော်ရန် စွဲလုံးလရှိစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ရပေမည်။
ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် ဧဝံဂေလိတရားကို မကြာခဏ ကြားသိရန်လိုအပ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏။ “စစ်၍မကုန်နိူင်သောခရစ်တော်၏ကြွယ်၀ခြင်း”ကို ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများအားပေးရုံသက်သက်ပေး သည်မဟုတ်။ တကယ်တော့ ဧဖက်ဩဝါဒစာစောင်မှာ “ဧဖက်မြို့၌ရှိသောသန့်ရှင်းသူများနှင့် ခရစ်တော်၌သစ္စာရှိ သောသူများ” အား ရေးသားသောစာစောင်ဖြစ်ပါသည်။ (ဧဖက် ၁း ၁ ) တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဤပေးစာစောင်တွင် ဧဝံဂေလိတရား၏ အချက်များစွာကိုဖော်ပြထားပါသည်။ ယေရှုဘုန်းတော်ကိုချီးမြှောက်၍ ဧဝံဂေလိတရားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသောကြောင့် ဤကျမ်းစာသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲရှိကျမ်းများ တွင် ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော ကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် တမန်တော်က သူတို့ကို ကယ်တင်ရန် ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာကို သူတို့အားသတိရစေခြင်းအားဖြင့် ဤခရစ်ယာန်များအား ခွန်အားပေး တိုက်တွန်းပေသည်။ ကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံးကျမ်းနှစ်ပိုဒ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
“ထိုအခါသင်တို့သည် ခရစ်တော်ကိုမသိ၊ ဣသရေလအပေါင်းအသင်း၌မဝင်၊ ဂတိတော်ပါသော ပဋိညာဉ်တရားနှင့်မဆိုင်၊မြော်လင့်ခြင်းမရှိ၊ လောက၌ဘုရားမဲ့ နေကြသည်ကို ၎င်း၊ အောက်မေ့ကြလော့။ သင်တို့သည် အထက်ကဝေးလျက်ရှိ သော်လည်း၊ယခုမှာ ယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အားဖြင့် အနီးသို့ရောက်ကြပြီ။” ( ဧဖက် ၂း ၁၂-၁၃ )
ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကြားလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လောက၌ မျှော်လင့်ချက်မရှိ၊ ခရစ်တော်ကိုမသိရှိကြကြောင်းကို သတိပေးရန်လိုအပ်ပေသည်။ “ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော် အားဖြင့် အနီးသို့ရောက်စေကြောင်း” ကိုလည်း အမြဲသတိရစေရန်လိုအပ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်း Newtownabbey ရှိ Trinity Presbyterian Church သင်းအုပ် Rev. Warren Peel တရားဒေသနာကို အမြဲဖတ်လေ့ရှိသည်။ Banner of Truth Magazine ထုတ်တရားဒေသနာတွင် Rev. Peel က သင်းအုပ်များအပါအဝင် ဧဝံဂေလိတရားကို ခရစ်ယာန်တိုင်းအမြဲကြား နာသင့်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သူက “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို၍ ၎င်းကို အသက်တာတွင် နေ့တိုင်းယုံကြည်ရမည်” ဟုဆိုထားသည်။ (Banner of Truth Magazine , ဩဂုတ်/စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃၊ စာ ၄ ) သမ္မာကျမ်းစာကွန်ဖရင့်တရားဟောသူကိုလည်း ထိုသို့ဆိုထားသည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို၍ ၎င်းကို အသက်တာတွင် နေ့တိုင်းယုံကြည်ရမည်”။ ယင်းမှာ ကောင်းသောအရာဖြစ်ပါတယ်၊ ဆရာရယ်။ ထိုသို့ ပြောသည့်အတွက် ကျေးဇူးတယ်ပါ၏။ သူ၏ထိုတရားဒေသနာကို ကျွန်ုပ်ကြားရသောအခါ ပြောင်းလဲပြီးသောလူ များဧဝံဂေလိတရားမကြာခဏ ကြားသိရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းရင်းရှစ်မျိုးကိုကောက်နှုတ်ပြီး နေ့တိုင်း ၎င်းအကြောင်းတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေရာ၌မျှ အစီအစဉ်အတိုင်းပေးမထားပါ။ ကျွန်ုပ်တွေးတောသကဲ့သို့သာရေးမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုထက်သာ၍ သင်တွေးတော နိူင်သည်။ ခရစ်ယာန်များ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဧဝံဂေလိတရားသည် အပြစ်ခံစားခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေသည်။ ( သင်းအုပ် Peel
ကသူ၏တရားဒေသနာတွင် ပေးဖော်ပြထားသည်။ )
၂။ ဧဝံဂေလိတရားသည် အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးသည်--အကြောင်းမှာ ခရစ်
တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်ပြီး တဖန်ပြန်လာမည်။
၃။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကိုပေးသည်။ (ယေရှုက “ ငါသည်ချမ်းသာပေး
မည်” ဟုမိန့်ဆိုခဲ့သည်။ မဿဲ ၁၁း၂၈ )
၄။ ဧဝံဂေလိတရားသည် စာတန်အားအောင်နိူင်သောတန်ခိုးကိုပေးသည်။ (သိုးသူ
ငယ်၏အသွေးတော်အားဖြင့် သူတို့ကို အောင်နိူင်၏။ ဗျာ ၁၂း၁၁ )
၅။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ဆုတောင်းခြင်းတွင် စိတ်ချမှုကိုပေးသည်။ (“ထို့ကြောင့်၊ ညီ
အစ်ကိုတို့၊ ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်တည်းဟူသော ကုလားကာအားဖြင့် ထိုသခင်
ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်၊ ငါတို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့၊ အ
သွေးတော်ကိုအမှီပြု၍အဆီးအတားမရှိ၊ဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်း၊” ဟေဗြဲ ၁၀း
၆။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ဒုက္ခခံရသောအချိန်တွင် ခွန်အားကိုပေးသည်။ (“ခရစ်တော်
ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကို ထာဝရဘုန်းအသရေတော်သို့ ခေါ်တော်မူသော၊ ခပ်သိမ်း
ကို စုံလင်တည်ကြည်ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်။” ၁ပေ ၅း၁၀ )
၇။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ဖြစ်နိူင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မထင်မှတ်သောအရာကို ပြည့်စုံစေ
သည်။ ( “ ငါ့ကို ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်း
သောအမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိူင်၏။” ဖိလိ ၄း ၁၃ )
၈။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ကျေးဇူးတော်၌ ကြီးထွားရင့်ကျင့်ရန် စိတ်ချမှုကိုပေးသည်။
( “သင်တို့တွင် ကောင်းသောအမှုကို ပြုစပြုတော်မူသောသူသည်၊ ယေရှုခရစ်၏
နေ့ရက်တိုင်အောင် ပြီးစီးလျက်ပြုတော်မူမည်ဟု ငါသဘောကျ၏” ဖိလိ ၁း ၆ )
လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က “ကျွန်ုပ်၏ကနဦးဘဝအသက်တာ”ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရားဟောခဲ့ သည်။ လူငယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသောဘဝအသက်တာအကြောင်းကို ပြောခဲ့သည်။ နတ်ဆိုးသည် ထိုဒေသနာကို လူငယ်တစ်ဦး၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် အဓိပ္ပါယ်တလွဲကောက်ယူစေသည်။ လူငယ်လေးက နောက်ပိုင်းတွင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောဘဝအသက်တာကိုဖြတ်သန်းရမည်ကို ကြောက်သဖြင့် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားရန် စိုးရွံ့မိကြောင်း ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့သည်။ နတ်ဆိုးက အဘယ်မျှလောက် အဓိပ္ပါယ် ကောက်လွဲစေသည်ကို သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဟောပြောသော ဒေသနာ၏အချက်အလက်မှာ သခင်ယေရှုထိုသို့ သောဒုက္ခများကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နိူင်ရန် ခွန်အားပေးနိူင်ကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ခရစ်တော်သည် ဘဝအသက်တာစိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း ရင်ဆိုင်နိူင်ရန် ခွန်အားပေးတော်မူလိမ့်မည်။ အပြစ်ကိုနောင်တရလျက် နောင်တရပါ။ ခရစ်တော်သည် သူ၏အသွေးတော်များဖြင့် သင်၏အပြစ်ကို ဆေးကြောတော်မူပြီး ခရစ်တော်မရှိ ဘဲ သင်အသက်ရှင်ခဲ့ဘူးသမျှထက် သာ၍ကောင်းသောအသက်တာသစ်ကို ပေးတော်မူမည်။ ကလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့် သီချင်းတစ်ပုဒ် သင်ယူထားသည်။
သူသည် မှန်သောဘုရား၊ မျှတသောဘုရား၊
( Palmer Hartsough ၁၈၄၄-၁၉၃၂ ရေးစပ်သည့် “ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ပြီ” )
သင်၏အပြစ်ကို ကျောခိုင်းပြန်လာလျက် ယေရှုကို ယနေ့ ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်။ ထို့နောက် ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကို သင့်ဘဝအသက်တာတွင် ဆင်ခြင်အောက်မေ့ပါ။ ယေရှုသည် သင်၏အပြစ်ကြွေးဆပ်ရန်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောရန် ယေရှုအသွေးသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားအသက်ကိုပေးရန် သေခြင်းမှ ခန္ဓာဖြင့်ထမြောက် ခဲ့သည်။ အပြစ်တရားမှ နောင်တရပြီး ခရစ်တော်ထံချဉ်းကပ်ပါ။ သင်သည် နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်သည် ခရစ်တော်အားကိုးခြင်းအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ စစ်မှန်သောခရစ် ယာန်ဖြစ်လိုသော်လည်းကောင်း စကားပြောေွဆွးနွေးလိုလျှင် သင်၏ထိုင်ခုံကို ကျောခိုင်းပြီး ဤအခန်း၏အ နောက်ဘက်ဆီသို့လမ်းလျှောက်လာပါ။ Dr. Cagan က ဆုတောင်းပြီး စကားပြောဆွေးနွေးနိူင်သော အခန်းထဲသို့ အခြားအခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပေမည်။ ဤနံနက်အစီအစဉ်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က ခရစ်တော်ကို လက်ခံယုံကြည်မည့်အကြောင်း Dr. Chan က ကျေးဇူးပြု၍ဆုတောင်းပေးပါ။ အာမင်………။
တရာဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith က ကျွန်ုပ်အလိုအပ်ဆုံးတေးသီချင်းဖြင့်ချီးမွမ်းသည်။ (တေးရေး-အမည်မသိ )